Kugamuchirwa kuCJ POD - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Chii chinonzi Kudonhedza
Nei Uchisarudza Kudonhedza
Maitiro Ekutanga A Kudonhedza Bhizinesi
Tsvaga Zvinokunda Zvigadzirwa
Dhinda pane Chido
Rarama Rukova Sevhisi
Ratidza sub menyu
Dhinda pane Chido Pro Service Sites Nhungamiro
Kugamuchirwa kuCJ POD
Post munyori By Andy Chou
Tumira zuva 05 / 11 / 2020
POD ndiko hunyanzvi hwe CJ Kudonhedza, kambani inodonhedza inovavarira kuve yakanakisa mukati mekambani inodonhedza. Iine matura epasirese uye dhatabhesi yezvigadzirwa pamwe nekutakura pasirese, ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa uye dzakakurumbira kudhinda-pane-inoda nzvimbo dzinoenderana netraffic uye mhinduro uye inosanganisirwa nekudonhedza inoita CJdropshipping sarudzo yakanaka. Chinhu chega chaunofanirwa kuita kutengesa online Dhinda pane zvinoda zvigadzirwa uye kushambadzira. Isu tinokubatsira kuti utore, Dhinda uye tumira kune vatengi.
Tinodhinda marogo, mapikicha uye zvinyorwa zvekuda kwako. Inonyanya ine zvinangwa zviviri zvetsika dhizaini: Kutanga, ku vaka zita revaridzi vezvitoro uye chechipiri, ku gutsa vatengi vako. Izvi zvinobvumidza iwe nevatengi vako kuwedzera zvakasarudzika zvigadzirwa kune edu zvigadzirwa munzvimbo ye "Dhinda pane Kuda" Kana iwe uine makuru dhizaini mazano, iwe unogona kugadzira wega. Uye iwe unogona zvakare kupa mikana kune vatengi vako kuratidza kwavo kugona uye kusarudzika.
Zviuru zvezvigadzirwa zvinodhindwa senge Zvishongo, Nhare Dzenhare, Mugs, Piro, T-shirts, Shangu, Mabhegi, Mabhedhi, uye zvimwe zvakawanda. Pamusoro pezvo, kune zvakare zvigadzirwa zvinodhindwa zvinoenderana nemazororo mazhinji, senge Zuva raValentine.
Isu tinozadzisa zvaunoda kubva kuchina, izvo zvinotipa mukana wekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro asi pamutengo unodhura, zvichikubvumidza iwe kunakidzwa nemabhadharo epamusoro uye kugutsa vatengi vako panguva imwechete.
Smart POD chimiro
CJdropshipping yakangwara uye yakareruka POD ficha inobatsira kudonhedza vanotakura kuti vabvumire nyore vatengi vavo kuisa mifananidzo uye zvinyorwa, hapana chikonzero chekutumira mafaera aya nemaemail. Paunenge iwe wanyora zvigadzirwa zveCJ's POD kuchitoro chako kana kubatanidza zvigadzirwa zvako zveShopify POD neCJ, CJ's POD ficha ichaenderana kune yako chitoro peji yechigadzirwa, uye vatengi vanogona kurodha zvakananga mifananidzo uye mameseji kana vachiisa maodha. Uye aya mafaera anoenderana zvakananga kuCJ pamwe neodha.
Kutarisa kwemhando yepamusoro
Isu tinonyatsoongorora zvinhu zvedu zvese tisati tazvitumira kunze senzira yekumanikidza, zvisinei nehuwandu hweodha. Unogona kuzorora uine chokwadi chekuti vatengi vako havawane chero chinhu chipfupi pane chikuru chigadzirwa.
Kuzadzikiswa uye Kutakura
Kupa Dhinda pane zvinodiwa, Kuzadzikiswa, uye Kudonhedza sevhisi pamitengo inodhura yeedu anodonhedza pasi rese. Nemakore matanhatu-eruzivo, CJ yakakura uye inyanzvi pakuzadzikiswa.
Kutanga & KUKUNDA BHUSI RAKO NE CJDROPSHIPPING
Kunyoresa Mahara, Hapana Mari dzeMwedzi
Kunyoresa pa CJ Kudonhedza mahara zvachose, uye hatibhadharise mari yemwedzi. Hapana mari yakavanzwa, iwe unobhadhara chete kana iwe uine odha yakagadzirira kutumirwa kunze.
Hapana Chidiki Chekuraira Wakawanda
Iko hakuna MOQ yekukumbira yako odha huwandu. Iwe haufanire kunetsekana nezve chero risingaenzanisirwe hesheni kana kuti unofanirwa kutenga inodhura michina yekudhinda.
Mafekitori Emuno Akabatanidzwa
Tinogona kupa zvakananga kana kuwana akanaka mutengesi muChina nemutengo uri nani kuburikidza neyedu yakakura network yevatengesi. Isu tiri kambani yeChinese saka tinoziva musika chaizvo. Zviri nyore kwatiri kutaurirana mutengo wevatengi vedu.
Tinogona kupurinda kana kunyora kambani yako kana wega logo pane zvigadzirwa. Zvakare, CJ inogona zvakare kuwedzera logo yako pa polybag, zip bhegi, bhokisi, kana makadhi ekutenda, zvimisikidzo zvetsika. Kana iwe uchida kunyora mucherechedzo pachigadzirwa kana kuisa pamwechete chigadzirwa chiripo mubhokisi rekunyorera, muchipo chakatemwa, kana mune imwe mhando yemabhuru ezororo, CJ inogona kubatsira neizvozvo futi.
Haufanire kunetsekana nezve kudhinda kwechigadzirwa, kutumira uye zvigadzirwa zvigadzirwa. Isu tinovimbisa kukupa iwe neyakanakisa masevhisi uye wakaderera chigadzirwa mutengo neyakavimbiswa mhando. Tanga bhizinesi rako izvozvi ne CJ POD.
Kana iwe uchifarira isu uye uchida kuve nehukama hwakadzama nevamiriri vedu, ndapota tinya anotevera ma chat link uye chero chinongedzo chiri chakanaka.
Tags cjdropshipping, dropshipping, POD
← Maitiro Ekutarisa Ekutumira Nguva Uye Kutumira Mari paCJ → 12 Mawebhusaiti ekuti Uwane Zvinogadzira Zvigadzirwa zveDropshipping
© 2022	Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Kusvika kumusoro ↑	Up ↑